Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Czech Republic Abadlali beBhola ekhatywayo I-Tomas Soucek Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology leNqaku
I-Tomas Soucek Biography yethu ineenkcukacha ngobomi bakhe boBuntwana, uBomi boPhuculo, uBazali, uBomi boThando (Intombazana encinci, Umfazi), amaNqaku oSapho, uBomi boBuntu kunye neNdlela yokuphila. Ngamafutshane, luhlalutyo olupheleleyo lwebali lobomi bakhe ukususela kwiminyaka yakhe yokuqala ukuya xa waba yinkwenkwezi yebhola.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungumdlali ophakathi onamandla kunye neempawu zokhuselo kunye nezihlaselayo. Nangona kunjalo, ababaninzi abaye bafunda i-Biography kaTomas Soucek enengqondo kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Ibali lokukhula kukaTomas Soucek:
Abaqalayo beBali loBomi, umgcini webhola ekhatywayo UPetr Čech iindlebe ezivela kwiRiphabliki yaseCzech. UTomas Soucek wazalwa ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kuFebruwari 27 kwidolophu yaseCzechia kwidolophu yaseHavlíčkův Brod. UTomas omncinci wazalelwa kubazali ogama lakhe alikaziwa ngexesha lokubhala i-biography yakhe.
Imvelaphi yosapho lukaTomas Soucek:
Enkosi kubabukeli bebhola obonakalayo, ukugquma kunye negama lokugqibela, akukho mibuzo okanye mathandabuzo malunga nobuzwe bakhe. Ukongeza, iingcambu zentsapho yebhola ye-genius ihamba ngokunzulu kwilizwe lakhe lokuzalwa - I-Czech Republic.
Ukukhula kweminyaka kaTomas Soucek:
Ngaba uyazi ukuba uSoucek omncinci wakhulela kwidolophu yakhe yokuzalwa eHavlíčkův Brod? Ukukhula edolophini, uSoucek wayeyintloko inde kunontanga bakhe. Wayemkhulu ngokubaleka nokudlala ibhola esemncinci kakhulu.
Imvelaphi yoSapho kaTomas Soucek:
Kuyingenelo ukuqaphela ukuba abazali bakaTomas Soucek baba negalelo ekumncediseni ukuba athandane ngokudlala nokudlala ibhola. Ngapha koko, umama omncinci kaSoucek owaziwa ngokuba ngumbaleki oqeqeshiweyo ngelixa utata wakhe wayengumthandi webhola. Bebonke, bobabini abazali banike uSoucek indlela elungileyo yokukhula kwinqanaba eliphakathi.
Uqala njani uKhathalelo lwebhola kwiTomas Soucek:
U-Asides uthumela umntwana owayesesikolweni ngelo xesha kwisikolo esihle, abazali bakaTomas Soucek babenomdla wokuqinisekisa ukuba amandla akhe aphuphumayo kunye nothando lokubaleka wayefumana kuqeqesho kwiklabhu yasekhaya - FC Slovan Havlíčkův Brod (2001-2004).
Ngexesha uSoucek wayeneminyaka eli-10 ubudala, waqala ukuziqeqesha noSK Slavia Praha. Iklabhu ibiziikhilomitha ezininzi kude neHavlíčkův Brod. Hayi enkosi kumgama, uSoucek waya kuqeqesho nje kabini kunye nomdlalo weveki. Emva kwexesha wafumana indawo kwisikolo sebhola kwaye waqala ukuziqeqesha rhoqo.
Ukuqala kweminyaka kaTomas Soucek kwiBhola eKhathaleleyo:
Kwakuse-SK Slavia Praha ukuba uSoucek wachitha iminyaka emininzi yobomi bakhe bebhola - phantse iminyaka elishumi phakathi kuka-2004 no-2014 - ubuchule obugqibeleleyo obuthile ngokubonakalayo kwindlela yakhe yokudlala.
Xa ixesha lalilungile, i-prodigy yebhola iklinikhi yaya e-Slavia Prague apho wenza khona iqela lakhe lebhola kunye nokufumana ikamva lebhola leqela lokuqala. Nangona kunjalo, ubengenakuqinisa isikhundla sakhe neqela lokuqala.
I-Tomas Soucek's Biography-Indlela eya kuLwazi ngeNdaba:
Yayingumbandela wexesha ngaphambi kokuba uSlavia Prague aqale ukuthumela uSoucek ngemboleko-mali nakwezinye iiklabhu. Eyokuqala yayiyiViktoria Žižkov apho umdlali omncinci angazange enze nempembelelo ngaphambi kokuba abuyele kwiklabhu yakhe yabazali.
Kwisizini ka-2016 ukuya kowe-17, uSoucek waphulukana nesikhundla sakhe neqela lokuqala likaSlavia Prague waya kwimali mboleko kuSlovan Liberec ngexesha lokuhambisa iwindow ebusika. Nangona umntu oyiselayo ebuyise iklabhu yakhe yabazali ekubeni egqibile ukubolekwa imali, eyokugqibela yayingekokuvakaliswa kwemali mboleko yakhe.
I-Tomas Soucek's Biography-Rise to Fame Ibali:
Xa uSoucek wajoyina iqela lePremier League kwi-West Ham kwisivumelwano semali mboleko yokuqala ngoJanuwari ka-2020, ngokukhawuleza umsebenzi wakhe waqala ngokutsiba okuqhubekayo. Nangona ikhontrakthi yayingeyokuqala yeSoucek ngaphandle kweRiphabliki yaseCzech, wayekhawuleza ukuziqhelanisa nebhola yesiNgesi kwaye wenza impembelelo enkulu kwimpuma yeLondon.
Akuzange kube kudala waba yintandokazi yabalandeli kwaye waqhubeka nokunceda icala lakhe ukuba lingacimi ndawo ngenxa yokufumana amanqaku kunye nokukhupha inani leetayile eziphambili. Ukukhawuleza phambili kwixesha lokubhala, uTomas ubonwa ngabalandeli abaninzi njengolutsha I-Pavel Nedved.
Abathandi bebhola abakwazi ukulinda ukuba umdlali okhuselayo asayine isigxina eWest Ham ngenxa yamaxesha amaninzi athe wanika iklabhu ithemba lokusinda ekunyuseni okukhulu. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
Malunga nentombi kaTomas Soucek kunye nabantwana:
USoucek usemtshatweni owonwabileyo emtshatweni wakhe nentombi yakhe uNatalia. Akukho nto ingako yaziwayo malunga nokuqala kwemifanekiso yothando. Nangona kunjalo, baqinisekile ukuba bebehlala kunye iminyaka emininzi ngaphambi kokukhusela umdlali ophakathi e-West Ham.
Dibana nosapho lukaTomáš Souček- Umfazi wakhe kunye nentombi yakhe. 📷: I-Instagram
Iibhanti zothando zinentombazana kunye. Igama lakhe nguTerezka. USoucek uyayithanda intombi yakhe kunye nentombi yakhe. Kananjalo, wenza konke okusemandleni akhe ukuqaphela izinto abanomdla kuzo ngalo lonke ixesha esenza izigqibo eziphambili ngomsebenzi.
Ubomi bentsapho kaTomas Soucek:
Njengoninzi lweSoucek yokumisa isikelelekile ukuba nosapho oluxhasayo. Apha, sikunika iinyani malunga nabazali bakaTomas Soucek, abantakwabo kunye nezihlobo.
Dibana nosapho lukaTomáš Souček. 📷: IPicuki
Malunga noTata kaTomas Soucek kunye noMama:
USoucek unabazali abancinci abaziwayo. Nangona kunjalo, siyazi ukuba umama wakhe wayenembali eqaqambileyo kwimbaleki njengembaleki yobuhlanga. Kwelinye icala, utata wakhe unomdla wokuqeqesha kwibhola ekhatywayo. Uvuma bobabini abazali ngokuthatha ithuba lokumqhubela uqeqesho. Ayimangalisi into yokuba umdlali webhola ekhatywayo abayise kuwo wonke umdlalo omkhulu. Uye azame nokuphila ukuze enze oko akulindeleyo.
Malunga Nabazala bakaTomas Soucek kunye nezihlobo:
USoucek useza kukhankanya ukuba wayenomzakwabo okanye udade wabo xa enika ingxelo ngobomi bakhe ngexesha lodliwanondlebe. Ngenxa yoko, kunokwenzeka ukuba kuphela komntwana azalwe ngabazali bakhe. Ngokumalunga neenkolelo zomdlali kunye nezihlobo, akukho nto ingako yaziwayo ngootatomkhulu bakhe. Ngokufanayo, oomalume bakhe, oomalume, abatshana, abatshana naye akaziwa,
Ubomi bobuTomas Soucek:
Umgama ukusuka kuTomas Soucek kwi-pitch p-ye-pitch yokuba ngumkhuseli omangalisayo kunye nosongelo lweenjongo, iinyani kunye nemibono ngokubhekisele kwi-exona yakhe ayikhathalelanga zombini ziyafana kwaye ziyathandeka. Abalandeli kunye nabadlali beqela bavuma kwinyaniso yokuba uqhutywa ngokweemvakalelo, uthobekile kwaye uyile.
Umdlali wasesiswini onomtsalane onomqondiso weZodiac yiPisces rhoqo wenza imisebenzi embalwa edlulisa umdla kunye nezinto azithandayo. Babandakanya ukumamela umculo, ukuqubha, ukuya kubona iinkawu (jonga ngezantsi) kunye nokuchitha ixesha elihle nosapho kunye nabahlobo.
I-Tomáš Souček iinyani zobomi bobuqu 📷: I-Instagram.
Ubomi bukaTomas Soucek:
Ngokumalunga nendlela uTomas Soucek ayenzayo kwaye ayisebenzise ngayo imali yakhe, ixabiso lakhe lemali liphantsi koqwalaselo ukusuka nge-2020 kaJulayi XNUMX. Nangona kunjalo, akukho nto iyiphikisayo into yokuba ufumana umvuzo kunye nemivuzo ebalulekileyo xa edlala ibhola ekhatywayo.
Ukongeza, umdlali okhuselayo wenza ingeniso ebonakalayo evela ekuqinisekiseni kwaye ngokuqinisekileyo akasayi kuba nangxaki yokuphila ubomi obutofotofo babahamba ngeenyawo abaneemoto ezibiza kakhulu kwigaraji yezindlu zabo.
Izibakala zikaTomas Soucek:
Ukugoba ibali lethu lobuntwaneni likaTomas Soucek kunye nenyaniso yebhayiloji apha ziinyaniso ezincinci okanye ezingachazwanga malunga nomdlali okhuselayo.
Inyani # 1- Tomas Soucek Mvuzo
ISIHLOKO / ISAHLUKO
Umvuzo kwiPounds ⟨⟨⟩
Umvuzo kwi Czech Czech (CZK)
Ngonyaka € 3,585,360 $4,097,529 £ 3,260,281 I-95,508,066 CZK
Ngenyanga € 321,530 $341,461 £ 271,690 I-7,958,755 CZK
Kwiveki nganye € 74,000 $78,678 £ 62,529 I-1,788,484 CZK
Ngosuku € 10,571 $11,240 £ 8,932 I-255,497 CZK
NgeYure nganye € 440 $468 £ 372 I-10,654 CZK
Ngomzuzu € 7.34 $7.8 £ 6.2 I-177 CZK
NgeSekondi nganye € 0.12 $0.13 £ 0.10 I-2.9 CZK
Yile nto UTomas Soucek uzuzile ukusukela oko waqala ukujonga eli phepha.
Inyani # 2- Amanqanaba e-FIFA kaTomas Soucek:
I-Soucek ine-FIFA 2020 yokulinganisa iyonke yama kwinqanaba angama-81 ukusuka kuJulayi. Ngaphandle kokuthetha ukuba yinto nje yexesha ngaphambi kokuba amaxabiso akhe alingane no-César Azpilicueta kunye noWilfred Ndidi omabini angama-84.
Inyaniso # 3 yeYiphi Inkolo uTomas Soucek Aziqhelanisa nayo?
Umdlali okhuselayo osemagqabini uza kunika isikhokelo malunga neenkolelo zakhe malunga neenkolelo zakhe kwimidiya yoluntu, kudliwano-ndlebe nakwibala lomdlalo. Nangona kunjalo, izinto ezingathandekiyo zimthandela kakhulu ukuba abe ngumKristu.
Inyani # 4 Trivia:
Ngaba uyazi ukuba unyaka wokuzalwa kukaSoucek - 1995 ubalulekile kwinani eliphambili lobuchwepheshe kuphambili kunye neziganeko zolonwabo? yayingunyaka wabhengezwa ngefomathi yokugcinwa kwengxelo ye-DVD ye-disc. Kwibala lezolonwabo, ngo-1995 ibingunyaka apho iifilimu ezinje ngePocahontas kunye noBatman zabetha iimuvi.
Inyani # 5- Wiki:
Igama eliphelele UTomas Soucek
Umhla wokuzalwa Ngomhla we-27 kuFebruwari ngo-1995
Indawo yokuzalelwa IHavlíčkův Brod kwiRiphabliki yaseCzech
Ukudlala Indawo Ukukhusela isikhuselo
Abazala N / A
abantwana UTerezk (intombi)
Ubungakanani benethi N / A
ukuphakama Iinyawo ezi-6, ii-intshi ezili-4.
Ndiyabulela ngokufunda eli nqaku elinengqiqo kwi-biography kaTomas Soucek. Siyathemba ukuba ukubhalwa okukuqinisekisayo kukuba kufanelekile ukuba azithathele ingqalelo kwimigudu ayenzileyo kwibhola ekhatywayo.
Kwi-Lifebooger, siyazingca ngokuhambisa i-bios elungileyo nechanekileyo. Ukuba ukhe wafumana naluphi na ucalucalulo okanye ingxelo engalunganga ngexesha lokunyanzelwa, nceda wenze kakuhle ukunxibelelana nathi okanye ushiye uluvo.
Impawu yomfanekiso obonakalayo: UTomáš Souček e-EURO ngo-2020 ukuQula isiQithi seRiphabhlikhi yase-Czech-Montenegro ngu UTadeáš Bednarz ilayisenisi phantsi I-Commons Commons- CC BY-SA 4.0.